Fomba fomba azon'ny governemanta ampiasaina amin'ny fiarovana ny tambajotra ho an'ny fakan-tsary amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Fomba izay azon'ny governemanta ampiasaina amin'ny fiarovana ny tambajotra ho an'ny fakan-tsary amin'ny vatana
Ny olana lehibe nonteknika iray lehibe manery fifanakalozana any amin'ny fampiasana ny fakan-tsary amin'ny vatana (BWCS) dia fiarovana. Misafidy ny fotoana handrenesana serasera ny lohahevitra iray. Misy ny mpiambina BWC vitsivitsy milaza ny fifandraisana rehetra eo amin'ny polisy sy ny misokatra ho voarakitra, fa ny sasany kosa dia te-hahita mpiasan'ny fitsarana manao fifidianana rehefa hisoratra. Ao anatin'ny fotoana fohy, ao amin'ny 12 dia misy lalàna izay mitaky ny fihaonana rehetra alohan'ny hisian'ny kaonty rehetra.
Ny fiheverana ny politika momba ity olana ity dia tsy misy dikany ary voafaritra tsara. Na izany aza, miteraka fisainana IT fototra: fiarovana. Ny tena mifanohitra amin'izay tokony ho hitan'ny manampahefana manodidina anao no aseho ao amin'ny taratasy akaiky momba ny fipoahan'ny fampahalalana momba ny fisintonana horonan-tsary an-jatony na an'arivony. Noho izany irery, ny CIO dia tokony handinika indray noho ny fahavitrihana amin'ny fikarakarana ny fomba hiatrehana ny fiarovana ny antontan-taratasy mihetsika.
Mikasika ny fandaharana eo an-toerana, ny CIO dia tokony handrefesana ny fanontaniana toy ny hoe "ohatrinona" sy "ohatrinona" miaraka amin'ny fidirana. Ho an'ireo birao mpampihatra lalàna izay mieritreritra fandaharana fitehirizana isam-paritra, ny safidy dia tokony handinika ny fiovan'ny filaminana amin'ny rafitra toy izany. Ny fandaminana fitahirizam-bola nozaraina dia afaka manome fikambanana mpikarakara lalàna vitsivitsy, indrindra ireo kely, miaraka amin'ny ambaratonga fiarovana izay tsy ho vitan'izy ireo raha tsy misy olon-kafa.
Na izany aza, rehefa tafakatra ny Vaomieran'ny Fikarohana Polisy, dia misy ny fandaharana rahona dia mitaky ny CIO sy ny fampiharana ny lalàna hamahana ny halehiben'izy ireo amin'ny fiantohana azy ireo. Ny fandriam-pahalemana hafa dia mifantoka amin'ny fisaintsainana rehefa manombana ny fizarana tahiry natokana ho an'ny vahiny dia misy:
Miaraha miasa amidy mpivarotra azo atokisana.
Midira amin'ny fifanarahana ara-dalàna izay mitantana ny fifandraisan'ny mpivarotra ary miantoka ny mombamomba ny birao.
Mampiasà rafitra iray izay niasa tamin'ny lalan-tsarimihetsika mba hiandrasana ny fanovana vaovao sy ny fidirana tsy ekena.
Mampiasà rafi-pandaminana manana paikady matanjaka ho fanamafisana ny fampahalalana amam-pandrosoana.
Mifanakaloza hevitra amin'ireo mpampanoa lalàna sy mpanolotsaina ara-dalàna alohan'ny handaminana ny raharaha rehetra.
Fakan-tsary miady amin'ny vatana ary miaro ny tambajotra an'ny governemanta:
Raha sanatria ka hahitana fa ny fakan'ny fakantsary iray natsangana amin'ny fanamiana cop dia ny hanomezana toerana kendrena an-dry zareo ny isan'ny traikefan'izy ireo, amin'ny ankapobeny, amin'izay fotoana izay, ara-dalàna, ny firaketana an-tsoratra dia tsy maintsy mijanona milamina ary tsy mety maty. Izany dia noho ny fijerena ara-drariny ny fampiharana ny lalàna, izay mety hampiasa ny firaketana ho porofon'ny fanenjehana an-tsehatra sy hanolorana ireo manampahefana izay mety ho voampanga tsy ara-drariny noho ny fitondran-tena ratsy, sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny, izay mety tsy hamporisika ny horonantsary. ny sarimihetsika izay notononin'ny tompon'andraikitra iray ho ratsy fitondran-tena dia nanana safidy hanakodia na hanitsy izany fotoana izany.
Steve Ward, polisy teo aloha ary ny CEO an'ny Vievu, mpamatsy fitaovana sy fandaharana fakantsary mitafy vatana, dia nilaza fa nahita fahamailoana maharitra hatramin'ny antsasaky ny taona talohan'izay, rehefa niara-niasa tamin'i Microsoft ny fikambanana mba hanome tahiry nozaraina amin'ny alàlan'ny Azure. Rahona avy amin'ny governemanta, izay mahafeno ny torolàlana an'ny FBI momba ny fampahalalana ny heloka bevava (CJIS).
"Indostrialy tsy miankina any Amerika, tsy manana fanadihadiana mitovy amin'ny fikambanan'ny governemanta izy ireo," hoy i Ward. “Manana fitantanan-draharaha mifototra amin'ny rahona izahay, misy roa ambin'ny folo amin'izy ireo any izay azon'ny orinasam-panjakana miankina manokana mitahiry vaovao, na izany aza ny governemanta dia zavaboary iray hafa. Araka izany, vao haingana izay dia tsy nisy ny fandaharana rahona izay manatanteraka ny torolàlana FBI. Izany no taonan'ny tsy finoana. Tsy niresaka fotsiny momba izany ny fampiharana ny lalàna, tsy nahatanteraka ny torolàlana tokony harahin'izy ireo izany, noho izany dia tsy nihetsika toy izany akory izy ireo. ” Lazaina ny marina, nitatitra ny FBI tamin'ny 2012 fa izay fitantanana rahona natolotra tamin'ny biraon'ny alàlana ho an'ny lalàna dia tokony hanaiky ny filan'ny filaminan'ny CJIS.
Mazava ho azy fa tsy ny filaminana no zava-dehibe indrindra rehefa mieritreritra ny hametraka ny horonantsary horonantsary ianao. Na dia mandinika ny rafitra misy azy manokana aza ny fikambanana tsirairay amin'ny fifandraisan'ny tompon'andraikitra amin'ny sehatra, ny Union Liberties Amerikanina dia niangavy ny fizarazaran'ny polisy mba hanatanteraka “fandaharana manerana ny birao izay manome baiko ny polisy hitady kaonty isaky ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina ankapobeny.” Fantatry ny PERF fa misy birao vitsivitsy mety hahatakatra izany fomba izany, kanefa nanintona ny saina fa ny traikefa vitsivitsy miaraka amin'ny toerana malalaka dia mitaky fiarovana, indrindra ireo lahateny misy olona iharan-doza na ireo vavolombelona izay tsy dia miraharaha loatra raha toa ka voarakitra an-tsoratra ny fanambarana nataony. Ny "metodôlika mahazatra kokoa" dia ny hampiasan'ny tompon'andraikitra ny fakantsariny "mandritra ny traikefa ilaina amin'ny fampiharana sy ny fampiharana, ohatra, ny fijanonan'ny fifamoivoizana, ny fakana an-keriny, ny fikarohana, ny fizahana rehetra ary ny fahalianana", hoy ny tatitra nataon'ny PERF. Ankoatr'izay, amin'ny ankapobeny, ny "fanatonana, amin'ny ankabeazany, dia mampiseho fa raha tsy mahomby daholo ny zavatra hafa rehetra, dia tokony hanao firaketana ireo tompon'andraikitra", araka ny voalazan'ny tatitra.
Na eo aza ny fomba fiasa, ireo fikambanana mampiasa fakantsary mitafy vatana dia hamokatra horonantsary betsaka. Ny fomba efa lany andro amin'ny fanohanana ny sarimihetsika amin'ny faribolana apetraka amin'ny polisy dia tsy vitan'ny manimba ny fahatokisan'ny malalaka ny programa toy izany - satria ahafahana miditra amin'ny firaketana an-tsary - fantsona iray momba ny drafitra HR sy fandaniana ihany koa izany.
“Alohan'izany dia mila manamboninahitra mpiasa ny polisy, mila mividy efitrano fanampiny, mila mandoa olona tena hiditra sy hanara-maso ara-batana ary hamerina handrakitra an-tsoratra ny rakipeo, ary hitako fa azonao atao ny mieritreritra hoe tena lafo sy mankaleo iza izany, ”Hoy ​​i Ward.
Efitra ho an'ny fanavaozana:
Na dia efa niomana tamin'ny fomba fanao matotra aza ny rahona amin'ny fikirakirana ireo fakantsary ireo, dia mbola manana ny fivoarana ihany ny fanavaozana. Ny sarimihetsika misy sary mihetsika mifanaraka amin'ny fakan-tsary manomboka amin'ny fakan-tsary mankany amin'ny rahona dia toa lavorary, saingy mbola tsy midina ety an-tany aloha izany. Miaraka amin'i Vievu, ohatra, ny tompon'andraikitra dia mila mamerina ny fakantsariny miverina amin'ny komandy manokan'izy ireo manokana, mampifandray azy ireo amin'ny PC, ary mavesatra ny fandraisam-peo amin'ny rafitra fitehirizana nozaraina irery.
Na eo aza ny zava-misy fa ny vokatra dia natao hitazomana ireo tompon'andraikitra tsy hanelingelina ny firaketana alohan'ny hametrahana azy ao anaty rahona, ny fomba fanao dia mbola mamela toerana ho an'ny hadisoana ihany. Ny paikady dia mety handidy ny hamindran'ny tompon'andraikitra ny ankamaroan'ny rakipeon'izy ireo, saingy mety tsy hampiato ny tompon'andraikitra amin'ny zavatra iray izany mba handositra ny fanapotehana ilay gadget alohan'ny hanomezana sary an-tsaina izay misy sary mihetsika. Ankoatr'izay, ny fomba ahiahy amin'ny vidin'ny fahaiza-manao dia midika fa manararaotra misafidy ny tompon'andraikitra marobe amin'ny fotoana handraisana an-tsoratra izay fikambanana mety hanao varavarana misokatra ho an'ny fifandirana.
Raha misy ny fanatsarana hatrany ny fanomezan-dàlana ny lalàna dia nahatonga ny fakantsary vaky vatan-tena ho tena ilaina tokoa, ny fanavaozana dia nandroso mba hahatonga azy ireo ho manan-danja ampy amin'ny fizarana lavitra. Ny departemanta amerikana amerikana hatramin'ny farany dia nitatitra programa fanandramana $ 20 tapitrisa izay hanampiany ny fampiasana ny birao fanomezan-dàlana maro ny lalàna, ary manolo-kevitra izany dia hiafara amin'ny zava-misy lehibe kokoa noho ny lamina fampiharana lalàna. Ary koa, tamin'ny mason'i Vievu, ny hany takian'izy ireo dia toerana voaaro hitahiry ny horonan-tsary rehetra.
"Ny lamina lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny asako dia ny rahona Microsoft Azure izay nohamafisin'ny CJIS izay iarahanay miasa," hoy i Ward. "Tombony miavaka io ary io no hanova ny zava-drehetra ao amin'ny fizarana fitantanan-draharaha."
Raha ny mahazatra, ny fitehirizana nozaraina dia valiny mendrika ho an'ity olana ity, indrindra satria io no mametra ny fidiran'ny tompon'andraikitra amin'ny firaketana. Na izany aza, mandritra ny fotoana lava be, ny fangatahana birao fitakiana lalàna mba hiankina amin'ny fampahalalana marefo toy izany amin'ny rahona dia tsy raharaha tsotra. Nisy tatitra (PDF) momba ny fakantsary efa tonta ho an'ny fampiharana lalàna izay navoaka tamin'ny volana septambra 2014 avy amin'ny Forum Executive Research (PERF) nampitandrina ireo fikambanana mba “handinika am-pitandremana ireo mpivarotra avy any ivelany,” ary nilaza fa maro ny mpitantana ny polisy no nivory noho io tatitra io mifantoka amin'ny tena zava-dehibe. ny fanekena ara-dalàna amin'ny mpivarotra fitehirizana entana.
Ny fanohanana ny CCTV dia manintona, na izany aza, ny porofo dia tsy maharesy lahatra. Izy ireo dia tafangona mandritra ny fotoana fohy, amin'ny toe-javatra mampiahiahy, ary tsy manaja fampisehoana azo refesina. Ny kilasy fanaovan-dratsy isan-karazany dia atambatra tsy misy tanjona, manaloka ny mety ho fitomboan'ny sasany ary hihena ny hafa. Ny zavatra hitan'i Ditton vonjimaika dia ny fihenan'ny CCTV ny tsy fanaovan-javatra eo ambanin'ny teboka ifotony manodidina ny 20% - mbola olo-malaza manamarika ihany koa, na izany aza ny iray izay azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana mandroso hiatrehana ny fanomezan-dàlana amin'ny lalàna.
Tatitra momba ny birao an-trano mitohy (CCTV eo akaiky eo no mifantoka - tatitra 68 amin'ny fanekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fikajiana ny fisorohana ny tsy fahampiana) amin'ny fiantohana ny rafitra CCTV. Ny tatitra dia mampiseho porofo fa ny fomba dia tsy dia manery noho ny noeritreretina teo aloha, ary ny vokadratsin'ny asa ratsy dia tsy mifanaraka. Any Newcastle, ohatra, ny haavon'ny asa ratsy dia nidina avokoa tany amin'ireo faritra tsy teo ambanin'ny fanaraha-mason'ny CCTV (nandroba 57% ny faritra nanaovana fanaraha-maso ny faritra afovoan-tanàna) nefa dia nilatsaka 39% ihany koa izany tany amin'ny faritany tsy misy fanaraha-maso. Ny fanitsakitsahana vitsivitsy dia nandà ny zava-dehibe kokoa tany amin'ny faritra tsy misy fanaraha-maso (ny fandrobana faobe dia nidina 11% teo ambanin'ny toerana ifantohana, ary ny 18% tany an-toeran-kafa).
Ireo fomba fijery diso dia indray mandeha ihany, raha amin'ny fotoana rehetra, dia taratry ny teoria fa ny CCTV irery ihany no manaratsy ny heloka amin'ny faritany ivelan'ny sehatry ny fakantsary. Anisan'ny misongadina amin'ny fomba fanaraha-maso amin'izao fotoana izao ny fampidirana ireo fakantsary tsy ho amin'ny sehatry ny asa fivarotana avo. Mety ho natsipy fotsiny ireo fanodinana diso avy amin'ny sehatry ny varotra ambony mankany amin'ny toerana ambany trano. Matetika ny komity dia mahita fa sarotra ny manohitra ny fangatahana ny frameworks toy izany.
Fomba izay azon'ny governemanta ampiasaina amin'ny fiarovana ny tambajotra ho an'ny fakan-tsary amin'ny vatana no farany niova: Desambra 5th, 2019 by Admin
4216 Total Views 2 Views Today